Waa Maxay Cudurka Sambabka Lo’du (CBPP)? |
Dhalinyarada Iyo Dhibaatooyinka Shaqo La’aanta
Dr. Cabdiraxmaan Max'ed Cabdiraxmaan — July 1, 2019
Cudurka sambabka lo’du waa cudur ku dhaca lo’da, buufalada iyo adhiga isla markaasna caaabuq ku sameeya hab-dhiska neefsiga, gaar ahaan sida magaca ka muuqata sambabada.
Cudurkan waxa keena bacteeriyada loo yaqaan ”mycoplasma mycoide sub-spp” waxaana la iskugu gudbin karaa xanuunkan taabashada tooska ah iyo waliba neefsiga, sidaas si la mid ah wakhtiga ugu badan ee uu xanuunkani faafaa waa wakhti roobaadka uu qoyaanku jiro.
Haddaba cudurkani waxa uu ku soo shaac bixi karaa, calaamadana ku muujin karaa muddo 6-10 cisho ah, mudada uu xanuunku jidhka soo galay ka dib.
Cudurkani waxa uu caan ku yahay saamayn dhaqaale oo baahsan iyo mid caafimaad oo uu gaysto, laakiin dadka wax dhibaato caafimaad ah kuma laha cudurkani, meelaha ugu badan ee dunida cudurkan lagu arko waxa ka mid ah waddamada, Chad, Ethiopia, India, Oman, Sudan, Tunisia, Turkey, Uganda, iyo Somalia.
Cudurkan astaamaha ama calaamadaha lagu garan karaa waxa ay u badan yihiin kuwa ka muuqda hab-dhiska neefsiga maadaama oo ay bakteeriyadani degto sambabada iyo inta la xidhiidha shaqo ahaan, haddaba marka horeba waxa lagu arki karaa bukaanka cudurkani asiibay astaamahan hoose:
Cudurkani waxa uu noqon karaa mid bukaanka dhakhso ku dila 2-3 cisho
Heerkul ka badan intii lagu yaqaanay xoolaha (40-42C”)
Qufac joogto ah.
Neefsiga oo ku adkaada bukaanka
Bukaanka cudurkani hayo waxa lagu rakaa isaga oo lugaha kala fogeynaaya si uu fursad ugu helo hawo qaadashada.
Intaas ka dibna waxa lagu arkaa bukaanka in uu istaago, socodkana yareeyo, candhuuf, duuf iyo xunbo uu afka ka saydhiyo.
Cudurkani si fudud ayuu markiiba xerada xoolaha ugu fidi karaa 70%
Sida oo kale dhimashadu way sarrayn kartaa mararka qaarkood 25%
Bukaanka cudurkani heyo marka la qalo waxa lagu arki karaa, sambabka oo isku laabma iyo biyo galay meelo sambabka ka mid ah.
Haddaba cudurkan waxa lagu khaldi karaa cudurada ay ka mid ka yihiin, qaaxada, susunka iyo cudurka la dhaho xummada markabka (shipping fever)
Marka la xaqiijinaayo cudurkan waxa muhiim ah in la qaado saambal yar oo laga soo gooyay sambabka neef dhintay ama dareere laga soo qaaday isla sambabka neefkaas, si looga baadho bakteeriyada cudurkan keenta.
Cudurkani sida aynu soo sheegnay waa cudur bakteeriyo keento isla markaana si fudud loo daaawayn karo, sida oo kale cudurkani waxa uu ku jiraa cudurada tirada yar leh ee bakteeriyadu keento kuwaas oo loo diyaariyay tallaal ka hor tag ah:
Inta cudurkani ku dhacay waxa lagu daawayn karaa daawada loo yaqaan
Xerada Inta caafimaad qabta waxa la siinayaa tallaalka ka hortagga ah ee cudurkan sambabku leeyahay.
wWxa muhiim ah in markasta oo aad xeradaada astaamo cudur ku aragto, in aad kala saarto xoolaha caafimaadka qaba iyo kuwa jirran, si loo yareeyo dhibaatada fiditaan ee cudurkaasi leeyahay.
Tags: Waa Maxay Cudurka Sambabka Lo’du (CBPP)?
Next post Wali Ma Maqashay Cudurka Loo Yaqaan Waalida Lo’da (Mad cow disease)?
Previous post Dhacsanaanta Cadaadiska Dhiigga (Hypotention).